वित्तीय क्षेत्र(वित्तीय क्षेत्र) -
३ जेठ, काठमाडौं । कुनैपनि सेवाको शुल्क तिरेपछि ग्राहकले बिल पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर, सरकारी कार्यालयमै बिल पाउन मुस्किल हुन थालेको छ । कोभिड–१९ बाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका बेला अत्यावश्यक सेवामा पर्ने दूर सञ्चार प्रदायक नेपाल टेलिकमको इन्द्रायणी शाखामा प्रिन्टरले बिल प्रिन्ट गर्दैन । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगमा रहेको...
काठमाडौं । देशमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु सञ्चालनमा छन् । सरकारी लगानीमा रहेका ३ पुराना बैंकहरु नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक अन्य निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित छन् । निजी बैंकहरुमध्येमा पनि विदेशी लगानीसहित स्थापना भएका र पुराना बैंकका रुपमा रहेको नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक आदिको आफ्नै...
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लि. ले चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेको छ । ३ अर्ब ७७ करोड चुक्ता पुँजी रहेको सो बैंकले समीक्षा अवधिमा ७८ करोड ३० लाख खुद नाफा कमाएको हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिसम्म बैंकको खुद नाफा ४९ करोड ३७ लाख रहेको थियो । अघिल्लो आवको सोही अवधिसम्म २० रुपैयाँ ४४ पैसा प्रतिशेयर आम्दानी रहेकोमा चालु...
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि.ले चालु आवको तेस्रौ त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ, जसमा बैंकले वितरण योग्य मुनाफामा २२७ प्रतिशतको वृद्धि गरी १ अर्ब ५४ करोड कायम गरेको छ । सो अवधिको बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा १ अर्ब ३४ करोड कायम रहेको हो । गत आवको सोही अवधिसम्म बैंकको वितरणयोगय मुनाफा ४१ करोड ९ लाख मात्र रहेको...
काठमाडौं । चन्द्रागिरी हिल्स लि.ले चालु आवको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा केवलकार तथा लक्जरी रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको सो कम्पनीले चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा १८ करोड ११ लाख घाटासहितको वित्तीय विवरण पस्किएको हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिसम्ममा २ करोड १८ लाख घाटामा रहेको कम्पनीको घाटा...
काठमाडौं । नेपाली धितोपत्र बजारको इतिहासमै सबै आवेदकलाई शेयर परेको एकमात्र लघुवित्त कम्पनीको शेयर कारोबारमा बिहीबार निकै चलखेल भएको छ । कारोबार खुलेको केही दिनमै स्वदेशी लघुवित्तसँगको मर्जरका कारण लामो समयदेखि कारोबार रोक्का रहेको सो लघुवित्तकको शेयर खुलेयता केही दिनदेखि निरन्तर सकारात्मक सर्किटमा रहेको छ । मंगलबारको बजारमा १६९९...
काठमाडौं । एनआईसी एसिया लघुवित्त कम्पनीको शेयरमूल्यमा विगत केही दिनदेखि निरन्तर सकारात्मक सर्किट लागिरहेको छ । साविकको स्वदेशी लघुवित्तसँगको मर्जरले लामो समयदेखि कारोबार रोक्का रहेको सो लघुवित्तको शेयर सोमबारको बजारमा १५४५ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरमा कारोबार भएको छ । ठुलो खरिद चाप र शून्य बिक्रीकर्ताका कारण कारोबार खुलेकै दिनदेखि...
काठमाडौं । हाल नेप्सेमा सूचीकृत लघुवित्त कम्पनीहरुमध्ये राम्रा कम्पनीहरु भनेर चिनिने लघुवित्त कम्पनीहरुको शेयरमूल्य २००० भन्दा बढी रहेको छ भने लघुवित्त कम्पनीको ट्याग मात्रै लागेका कम्पनीहरुको मूल्य पनि १००० रुपैँयाभन्दा बढी नै रहेको छ । हाल बजारमा सूचीकृत लघुवित्त कम्पनीहरुमध्ये सर्वाधिक शेयरमूल्य भएको जनउत्थान सामुदायिक...
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंक(निफ्रा)को शेयर कारोबार आइतबारबाट खुल्ने भएको छ । नेप्सेले दिएको जानकारी अनुसार नेप्से र बैंकबीच आज अर्थात् २०७७ माघ २९ मा कारोबारसम्बन्धी सम्झौता भएको हो र त्यसको दोस्रो दिन अर्थात् आगामी आइतबारबाट कारोबार खुल्ने भएको हो । नेप्सेले सो बैंकको पहिलो कारोबारका लागि थोरैमा ११३ रुपैयाँ ६२ पैसा र बढीमा...
काठमाडौं । अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीको परिवारका केही सदस्यले ठुलो परिमाणमा एनसीसी बैंकको शेयर खरिद गरेको आशंकापश्चात् आइतबारसम्म उचालिएको सो बैंकको शेयर मूल्यमा सोमबार सामान्य करेक्सन आएको छ । इन्साइडर ट्रेडिङको आशंकामा आईतबार नेप्सेले बैंकलाई स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो । बैंक व्यवस्थापनले कुनै शंकास्पद कारोबार नरहेको भनी...
बैंकहरुको १० वर्षे प्रतिफल विश्लेषण : नबिलभन्दा सिद्धार्थ बैंक अगाडि !
काठमाडौं । पछिल्लो समय धितोपत्रको दोस्रो बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै गइरहेको छ । नेप्से परिसूचक, सेन्सेटिभ इन्डेक्स र कारोबार रकममा समेत नयाँ–नयाँ रेकर्डहरु बन्दै गइरहेका छन् । लगानीकर्तालाई दिनप्रतिदिन नाफा बुक गर्न भ्याई–नभ्याई भइरहेको छ । हाल कायम २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सिभिल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य...
काठमाडौं । रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका दुई बैंकका साधारणसभा शुक्रबार हुँदैछ । २२ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको प्राइम कमर्शियल बैंक तथा कैलाश विकास बैंकको मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्तावसहितको साधारणसभा तथा २३ वर्षपछि आकर्षक लाभांश प्रस्ताव गरेको नेपाल बैंकको उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने उद्देश्यले...
काठमाडौं । बीमा समितिले १० ओटा बीमाको बजार खोसेर ३ ओटा बीमा कम्पनीलाई दिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्षेत्र पाएका ती कम्पनीहरुको १/१ ओटा जिल्ला कार्यक्षेत्र खोसेर समितिले ३ ओटा नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई दिएको हो । काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला बाहेकका ७५ जिल्लाहरुमा यस्ताे कार्यक्रम...
काठमाडौं । नियामकको निर्देशन र ऐन कानूनहरुको परिपालना राम्रोसँग भएको भए पुस ९ गतेभित्र सबै पब्लिक कम्पनीहरुले साधारणसभा बोलाइसक्नुपथ्र्यो । तर बजारमा सूचीकृत भएका कतिपय कम्पनीहरुले समेत अझै पनि साधारणसभा बोलाउन सकेका छैनन् । त्यसमध्ये ४ ओटा त वाणिज्य बैंक नै छन् भने २ ओटा राष्ट्रिय स्तरकासहित ९ ओटा विकास बैंक र १० ओटा फाइनान्स कम्पनी...
काठमाडौं । एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर हुने नगद कारोबारको सीमा बढेको छ । अब एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर १ लाख रुपैंयासम्म निकाल्न सकिने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर दैनिक सो परिमाणसम्म रकम निकाल्न सक्ने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गरेको हो । यसअघि दैनिक ६० हजार रुपैंया निकाल्न पाइन्थ्यो...